Muri pano: musha / Mac & Apple / Wepamusoro 10 Microsoft To-Do Matipi uye Matipi eIOS
Microsoft To-Do ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa kuita-ita zvinyorwa zveApple uye mamwe mapuratifomu. Mumwe anogona kuishandisa kugadzira zvekuita-zvinyorwa, kugadzira zviyeuchidzo, kutora zvinyorwa, nezvimwewo. Heano gumi epamusoro Microsoft To-Do matipi uye manyorerwo eIOS yaunogona kushandisa pane yako iPhone.
Microsoft To-Do Matipi uye Matipi eIOS (iPhone / iPad)
Kune akatiwandei manejimendi manejimendi maapplication anowanikwa eIOS. Nekudaro, Microsoft To-Do ndeimwe yeakanyanya kufarirwa, nekuda kwekuurayiwa kwezvinhu izvo zvairi kupa. Iyo inouya neyakareruka, yakatwasuka interface, inoteverwa neifty maficha uye kusangana pamwe neAptlook.
Pazasi pane mashoma anobatsira Microsoft To-Do matipi uye manomano aunogona kushandisa pane yako iPhone kuti uwane zvakanakisa kubva kuapp.
1. Zuva Rangu
Vanhu vazhinji vanosarudza kuronga zuva rinotevera kuti vaite mabasa ese zvinobudirira uye nehurongwa. Microsoft To-Do's "Zuva Rangu" inoratidza hurongwa hwezuva. Pano, iwe unogona kuwedzera ese ako mabasa akarongerwa zuva racho.
Iwo mabasa anozongo nyangarika mushure mehusiku. Uyezve, unogona kuongorora iro basa runyorwa uye kufambira mberi kwako zuva nezuva. Iwe unogona zvakare kupa mabasa asina kukwana ezuva rinotevera.
2. Contextual Menyu Mapfupi
iOS inotsigira zvimiro zvenguva pfupi zvemenu umo iwe unodzvanya-pusha purogiramu pachiratidziro chemumba kana raibhurari yeapp uye kusvetukira kune chaunoda chiito.
Kuramba uchitsimbirira paMicrosoft To-Do pachiratidziro chemusha kunokupa menyu inotenderera ine mapfupi ku kutsvaka, yakazaruka My Day, uye Gadzira a Basa Nyowani. Unogona kushandisa sarudzo idzi kutsvaga mumazita nekukurumidza, ona yako zuva kuronga, kana kuwedzera basa nyowani.
3. Microsoft To-Do Widgets yeIOS 14
Microsoft ikozvino yawedzera rutsigiro rwemahwindo echidzitiro epamba pane yazvino vhezheni yeIOS. Kuti uwedzere majeti, pinda-bata pane iyo nzvimbo pane yako iPhone chidzitiro chemba, wobva wadzvanya + icon kumusoro kumusoro kurudyi. Tsvaga "Kuita" kana peta pasi kuti uwane mawijeti kubva kuMicrosoft To-Do kuti usarudze widget yesarudzo yako.
Ita shuwa kuti urikushandisa yazvino vhezheni ye Microsoft To-Do. Parizvino, unogona kuwedzera kusvika kumatatu emhando dzeTo-Do zvipenga pane iOS 14:
Yako Yekuita Widget
Wangu Zuva Widget
Wedzera Task Widget
a. Mabasa Ako
Iyo Yako YeMabasa widget inokubatsira iwe kusarudza uye kuona mabasa kubva pane runyorwa rwewaunosarudza. Iwe unogona kushandisa iyo widget mune maviri saizi. Iyo yepakati widget inoratidza rondedzero yemabasa ako. Kune rimwe divi, hombe widget inoratidza runyorwa rwemabasa ako uye nemazuva akakodzera, uye zvimwe zvinhu.
Unogona kushandura rondedzero yewidget nekuitsikirira kwenguva refu nekudzvanya pa 'Hora Widget.'
b. Wangu Zuva Widget
Widget Yangu Yezuva inokuratidza iro rekutanga basa rezuva. Kuti uzarure kana kuona mamwe mabasa, unogona kubata chero pawijiti- izvi zvichavhura iro rakazara Zuva Rangu runyorwa muMicrosoft To-Do.
c. Wedzera Task Widget
Uchishandisa iyo Wedzera Task widget, unogona kukurumidza kuwedzera basa kune yako sarudzo runyorwa pasina chikonzero chekuvhura iyo To-Do app. Tinya chero pawijiti kuti uwedzere basa nyowani pane rako runyorwa. Kuti uchinje rondedzero panowedzerwa mabasa, pinda-pinda iyo widget uye shandisa iyo 'Hora Widget' sarudzo.
4. Siri mapfupi
Siri mapfupi anorerutsa mabasa akaomarara pane yako iPhone kuita chiito chimwe chete. Uye nerombo rakanaka, Microsoft To-Do inosanganisa mapfupi eSiri mapfupi. Kuwedzera mapfupi eSiri eTo-Do:
Vhura Microsoft To-Do pane yako iPhone.
Dzvanya yako yemufananidzo mufananidzo pakona yepamusoro yekurudyi.
Pachirongwa chinotevera, sarudza Siri Shortcuts.
Pano, pombi Wedzera Basa uye wedzera mutsika wechirevo kutaurira Siri kuwedzera basa nyowani.
Saizvozvowo, tapira Vhura Rondedzero uye wedzera mutsika wechirevo iwe waunogona kuudza Siri kuti avhure runyorwa.
Iwe unokwanisa kugadzirisa runyorwa rwaunoda kuwedzera mabasa kwarwo kana kuti ndedzipi runyorwa iwe rwaunoda kuvhura mune ese ari maviri mapfupi. Iwe unogona zvakare kuwedzera mapfupi mapfupi ezvizhinji zvinyorwa.
5. Auto Mazano
Paunowedzera basa, Microsoft To-Do inozviputsa yega kuti unzwisise zuva kana nguva. Semuenzaniso, kana iwe ukanyora kuti "Cancel Prime Video kunyorera paFeb 28" kana "Tarisa PC na12 am", zvinobva zvangoziva chiitiko chenguva-uye kuratidza kuti iwe ugadzire chiyeuchidzo chenguva iyoyo kana zuva racho.
Ingo tapota zano-rakavakirwa nguva uchiwedzera iro basa, uye zvinobva zvango wedzera chiyeuchidzo chezuva kana nguva inodiwa. Izvi zvinobvisa kudiwa kwako kuti usete zuva kana nguva yebasa rega rega nemaoko.
6. Maka Email seBasa
Kufanana nezvimwe zvigadzirwa zveMicrosoft, Microsoft To-Do ine kubatana kwakasimba neiyo-imba Outlook Mail Kana iwe ukatambira email ine rimwe basa, unogona kuimaka sebasa. Mushure meizvozvo, iyo email ichawedzerwa kune yako To-Do rondedzero.
Semuenzaniso, kana iwe uchimira email nezve yako magetsi bhiri sebasa, To-Do inozokuyeuchidza nezvazvo pazuva rakatarwa.
Chinja App theme
Zvakanaka, ndiani asingade maitiro? Kana iwe wakaneta neiyo yekumashure kumashure, iwe unogona kusarudza kubva kuboka reakavakirwa-mukati matimu ezvimwe zvinyorwa paMicrosoft To-Do. Zvese zvaunoda kuti uite kuvhura rondedzero, tinya matatu matatu kumusoro kumusoro kurudyi, uye tinya Chinja Musoro.
Pano, iwe unogona kuseta iwo mavara kana mapikicha esarudzo yako senge kumashure kweiyo runyorwa. Nekudaro, iwe haugone kuwedzera mifananidzo kubva kugalari izvozvi. Chero zvazviri, iyo yazvino theme theme yakanaka futi.
8. Shandisa Swipe Gestures
Microsoft To-Do inotsigira nyore swipe mitezo yekubvisa basa kana kuiwedzera kuZuva Rangu. Unogona kusveta kuruboshwe pane basa kuti riwedzere kune iro Zuva Rangu. Saizvozvo, unogona swipe kurudyi kudzima iro basa. Izvi zvinobatsira iwe kuronga zvinhu nekukurumidza nekukurumidza pane kutambisa nguva yako uchikomberedza uchitenderedza sarudzo.
9. Gadzira Sub Sub Tasks
Unogona kuve nemabasa akaomarara anogona kunge aine matanho akawanda. Muchiitiko ichocho, unogona kurerutsa basa nekuwedzera ma-sub-task. Kuti ugadzire sub-task, tinya iro basa uye tinya pa Wedzera Nhanho. Wobva wawedzera matanho ese ari pabasa uye tinya Done kumusoro kwepamusoro.
Iwe unogona ikozvino kumaka iwo madiki-mabasa rimwe nerimwe kana iwe uchipedza iwo. Basa hombe harizomirwi kupedzwa kusvikira wapedza ese madiki-mabasa. Iwe unogona zvakare nemaoko kudhonza uye ku-resa zvekare ma-sub-mabasa zvinoenderana nekukosha kwawo.
10. Goverana Chinyorwa chako Nevamwe
Zvinyorwa zvako zvinowanzo sanganisira vamwe vanhu, toti, urikugadzirisa chirongwa pasi pevamwe vane mabasa akasiyana. Kuti uone kuti munhu wese anoteedzera zveboka rebasa, unogona kuwedzera vamwe vako kana vamwe vanhu kuTo-Do.
Kuti uite kudaro, vhura iyo rondedzero uye tinya iyo Koka icon pane yepamusoro kurudyi kona. Wobva wakoka vanhu vachishandisa mameseji eSMS kana mapuratifomu Vanhu vakakokwa vanogona kujoina uye kugadzirisa rondedzero. Zvese zvavanoda kuve neakaundi yeMicrosoft.
Kana vanhu vese vaida kuwedzerwa, unogona kumisa chero nhengo nyowani kubva kujoina mu Manage Access marongero. Iwe unogona zvakare kurega kugovera runyorwa nevamwe uchishandisa iyo Stop Sharing sarudzo pasi peManage Access.
Kuputira Kumusoro: Matipi & Matipi eMicrosoft To-Do pane iOS
Idzi ndidzo dzaive dzakakosha Microsoft To-Do matipi uye manomano eIOS kuwedzera yako kugadzirwa. Kunze kwezvose, chandinoda maAuto Mazano- Ndinovawana anonyatso kubatsira dzimwe nguva. Kunyange zvakadaro, ndechipi chezvinhu chaunonyanya kufarira? Ndizivisei mune zvakataurwa pazasi.
IOS 14 yazvino vhezheni, matambudziko & zvitsva zvinouya ku iPhone
Maitiro ekugadzirisa yako iPhone kumba sikirini neWidgetsmith uye Shortcuts
iPhone 7 uye iPhone 7 Zvimwe mazano, maitiro uye zvakavanzika: Tsvaga kubva pa iPhone yako
Filed Under: Mac & Apple Tagged With: Application software, IOS, iPhone, Microsoft, Mobile app